Mogadishu Journal » 2019 » October » 4
Mjournal :-Gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa markii ugu horreysay laga dhisey ciidamada Kumaandooska ee sida gaarka ah u tababaran. Ciidamadan oo gaaraya 250 askari ayaa qeyb ka ahaa 3000 oo askari oo ciidamo cusub oo Liyu Boolis ah oo dhowaan tababar loo soo xiray. Ciidamadan...
Man United waxaa laga yaabaa iney sida Liverpool sugto muddo 30-sano ah hanashada horyaalka Premier League, waxaa sidaas qaba halyeeygii hore Blues – Jason Cundy – kaas oo sidoo kale ka argagaxay xaaladda ay wakhtigaan ku sugan tahay kooxda 20-ka jeer heysta horyaalka Premier...
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday in ay diidan tahay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee horyaala maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Ra’isul Wasaare ku xigeenka dowlada federalka Mahad Maxamed Guuleed oo madax ka ah wafdi dowlada Soomaaliya...
Xildhibaano Soomaali Kenyan ah oo baaritaan lagu hayo
Mjournal :-Guddiga anshaxa, la-dagaalanka iyo ka hortaga musuq-maasuqa Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan oo haystaa baasaboorada dalalka kale ay xilalkooda wayn doonaan. Mudanayaashan ayaa waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale, Yuusuf Xasan Cabdi,...
Tammy Abraham oo weli Go’aan gaarin
Weeraryahanka qaab ciyaareedka fiican leh Tammy Abraham ayaa sheegay inuusan go’aan ka gaarin midka uu u ciyaari doono xulalka England ama Nigeria ka dib goolkiisii ​​uu dhaliyay kulankii ay 2-1 kaga badiyeen kooxdiisa Lille tartanka Champions League. Tammy Abraham iyo Mason...
Faah Faahin ka soo baxaya duqeyn dad rayid ku dhinteen oo ka dhacay Jubbada Hoose
Mjournal :-Wararka laga helayo Gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in Diyaarado dagaal oo loo maleynayo iney leedahay dowladda Kenya ay duqeyn ka geysatay deegaanka Hoosingoow, iyadoo duqeyntan ay khasaare ka soo gaartay dad Shacab ah. Sida wararku sheegayaan Diyaaradaha ayaa...
Guddoomiye Cumar Filish “Xilalka dowladda waxa loo salaxay ciyaalka Xaafada”
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo ka hadlayay xaflad lagu soo dhoweynayay Taliye kuxigeenka cusub ee Booliska Soomaaliyeed Cusmaan C/llaahi Kaniif ayaa sheegay in xilalka dowladda beryahan loo magacaabo ciyaalka...
Axmed Madoobe oo sheegay in hubka Dowladda loo geeyo Al-Shabaab
Mjournal :-Madaxweynaha dib loogu doortay Maamaulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in Amniga dalka Soomaaliya xilligaan uu marayo meel aan wanaagsaneyn,isla markaana Dowladda federaalka ay ka gaabisay dagaalka lagula jiray Al-Shabaab. Waxaa uu sheegay in dagaalkii...
National Assembly Majority leader has dismissed claims that he holds both Somali and Kenyan citizenship. Duale on Thursday said he has never held citizenship of another country and never will. This comes after EACC launched investigations into claims that several public officers...
Ilaah Cumar oo Jabuuti kula kulantay madaxweynaha Jabuuti
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Senator Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Congresska Maraykanka oo dalkaa booqaneysa. Geelle iyo Ilhaan ayaa ka wada hadlay xiriirka labadadal ee Maraykanka iyo Jabuuti, iyadoo...
Dowladda Soomaaliya oo wada qorsho dib loogu furaayo Safaarado
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad qorshaha dowaldda Soomaaliya ee ku aadan in Soomaaliya ay dib u furato safaaradihii ay ku lahaayeen wadamada Caalamka. Wasiir Cawad waxaa uu sheegay In Dowladda Soomaaliya ay wado qorshahaas...
Mjournal :-U yeedhitaanka labada dhinac ayaa ka dambaysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ahaa in dib loo dhigo dhagaysiga ilaa bisha Sebtember 2020-ka. Soomaaliya ayaa la sheegay inay codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay, ayna ku...